Filohan’ny HCC : ” Mazava ny valim-pifidianana, tsy mila korontana ny vahoaka “ | NewsMada
Filohan’ny HCC : ” Mazava ny valim-pifidianana, tsy mila korontana ny vahoaka “
Tsy araka ny nanampoizin’ny sasany azy ny voka-pifidianana? Na izany aza, mazava ny valim-pifidianana. “Tsy mila korontana ny vahoaka malagasy”, hoy ny filohan’ny HCC, Rakotoarisoa Jean-Eric.
“ Mazava ny valim-pifidianana, tsy mila korontana ny vahoaka malagasy… Ampahatsiahivina ny tsirairay fa tsy ny fitsarana no mifidy ny kandidà ho lany fa ny vahoaka malagasy izay nifidy rehetra no misolo toerana azy. Ny hampanaja ny tena safidin’ny mpifidy no asan’ny fitsarana. Raha ny resaka fifidianana, tsy misy ny fahaganana na ny “magie””.
Io no nambaran’ny filohan’ny HCC, Rakotoarisoa Jean-Eric, tamin’ny lanonam-pitsarana nanambrana ny voka-pifidianana ofisialy teny amin’ny lapan’ny HCC, Ambohidahy, omaly. Vita iny ny dingana iray lehibe, na nisy aza ny sakana sy famingampinganana maro samihafa. Nanao ny asany araka ny rariny sy ny hitsiny ny HCC.
Hakana lesona ny vita
“Mila misintona lesona momba ny fihodinana voalohany isika: ohatra, ny Ceni sy ireo mifanandrina amin’ny fihodinana faharoa no tokony hiara-miisalahy mametraka ny resaka infomatika itokisan’ny rehetra”, hoy izy. Ny tombontsoan’ny mpifidy no lolohavina ambonin’ny loha amin’izany, ary amin-kitsim-po no hanaovana an’izany.
Tokony hisy fepetra horaisina ihany koa hizarana ny karatry ny mpifidy, be loatra ny tavela. Tohizana ihany koa, na fohy aza ny fotoana, ny fanabeazana ny olom-pirenena momba ny fifidianana. Mila hatsaraina amin’ny ankapobeny ny fikarakarana ny fifidianana.
Tsy mpifahavalo ny kandidà roa
Ho an’ireo kandidà roa hiatrika ny fifidianana fihodianana faharoa, mpifaninana ianareo fa tsy mpifahavalo. Samy Malagasy ianareo, ary iombonana ny firenena. Ny iray aminareo no hitondra ny tany sy ny fanjakana manomboka amin’ny fianianana amin’ny volana janoary. Filoham-pirenen’ny Malagasy tsy ankanavaka. Koa fadio ny mety hampiady, hampisaraka, mandrafy, ny mifampihantsy, fa mila ny firaisankinan’ny Malagasy rehetra izao fotoana izao. Tezao amin’izany ny mpomba anareo.
Mampitandrina izay mikotrika adim-poko
Mampitandrina dieny izao ireo alaim-panahy hikotrika sy handrehitra adim-poko eto amin’ny firenena. Tsy azo leferina izany ary tsy maintsy mandray andraikitra ny governemanta sy ny mpitandro filaminana. Manantena antsika rehetra hiroso amim-pilaminana any amin’ny fihodinana faharoa am-panajana ny soatoavina malagasy. “Ny mpifidy no tompon’ny teny farany”, hoy izy.
Kandidà laharana faha-13, Rajoelina : “Takina ny fifidianana madio sy mangarahara ka handray fepetra izahay amin’ny fihodinana faharoa. Hametraka olona eny anivon’ny SRMV hanara-maso hanatanteraka ny fikirakirana ny voka-pifidianana mandra-pahatonga izany aty amin’ny Ceni. Handresy isika ary vonona ny hanavotra ny firenena matoa mirotsaka… Miantso antsika olom-pirenena tsy nandray anjara mba hifidy . Misokatra ny varavarana ary vonona hifanome tanana izahay. Handresy lahatra ireo tsy nifidy tamin’ny fihodinana voalohany. Betsaka ny tsy tomombana sy lesoka, indrindra tamin’ny fikirakirana ny voka-pifidianana. Nisy birao fandatsaham-bato miisa 133 nofoanana ny voka-pifidianana, araka ny nambaran’ny HCC ary nitondrana fanitsiana. Izany hoe, nisy vatonay roa arivo mahery novonoina izany tao… Ilaina ny fanarenana izany”
Solontena maharitry ny Pnud eto amintsika, i Violet Kakyomya : « Mankasitraka ny fahendren’ny vahoaka malagasy tamin’ny nahavitana ny fifidianana fihodinana voalohany amin’izao namoahan’ny HCC ny voka-pifidianana izao. Eo anilan’i Madagasikara hatrany ny fianakaviambe iraisam-pirenena, indrindra ny Pnud. Efa nanao ny tombana sy ny fijerena ny tsy nety na ny lesoka ny Ceni, nikarakara ny fifidianana, ka antenaina ny hizoran’ny fihodinana faharoa amin’ny tokony ho izy. Vonona ny hanohana sy hanampy ny firenena sy ny vahoaka malagasy hatrany izahay ».
Solontenan’ny kandidà Ravalomanana , ny Me Razafimanantsoa Hanitra : « Nisy ny lesoka sy ny tsy nety ka tokony harenina. Tsy maintsy hijery sy hanara-maso ny tsy mety izahay amin’ny fihodinana faharoa. Ohatra, nisy fividianana olona nefa voararan’ny lalàna izany ary mampigadra. Tsy azo fidina ny safidim-bahoaka ka ho hentitra ny fanaraha-maso… Henontsika teo koa fa tsy mitombina avokoa ny fitoriana na noraisina aza. Tokony hampandinika izany. Miantso ny mpikamban’ny Birao fandatsaham-bato (BV) izahay fa betsaka ny PV tsy nety sy ny vato maty na fotsy. Tsy maintsy soloina ireny olona tsy nahavita ny asany ireny. Tsy ampy ny fiofanana ho an’ny mpikamban’ny BV sasany”.
Mpanara-maso ny fifidianana Safidy, Andriamoraniaina Harijaona : “Efa roa izany izao sisa ireo kandidà fa tsy marobe ka tokony ho tsaratsara kokoa ny fikarakarana sy ny fanomanana ny fihodinana faharoa. Entanina ny vahoaka handeha hifidy ka hanao safidy voahevitra. Aoka isika tsy hanaiky ny fividianana ny vatontsika. Entanina koa ny hampianarana sy hanomezana torolalana amin’ny fampiasana biletà tokana. Nisy ny vato maty noho ny tsy fahaizan’ny olom-pirenena ka tohizana ny fanentanana momba izany. Hanatsara ny fomba fiasanay koa izahay mpanara-maso fifidianana”